About Us - Zhe uJiang XinHong Electric Co., Ltd
Products: uphando oluzimeleyo kunye contactors AC uphuhliso (AC_and_DC_du-al-ukusetyenziswa ukunyuka kwamaqondo ephantsi low power nelyo umgangatho IEC60947.2..). ukuwa anti (Feng Xing) lwekontraka eyodwa elevator.Special lwekontraka for boiler.ac amanzi contactor.dc block zoqhagamshelwano contactor.auxiliary, Ukulibaziseka kwexesha block.star olwandle starter, starter obiyelweyo, thermal ukuxinana relay njalo njalo.
amandla Enterprise: kufuneka elebhu, isebe intengiso, uphando kunye isebe lophuhliso, isebe mveliso, isebe esemgangathweni, isebe ulawulo kunye neqela ingcali lobungcali, siqalisa ngokupheleleyo abaphathi EIP. inkampani yethu upasisiwe ngokupheleleyo ngenxa isiqinisekiso kwinkqubo lomgangatho IS09001. iimveliso zethu ziqinisekiswe CCC kunye CE, ziye uphando thina yaye yaqulunqa CNC5 series AC lwekontraka kunye CNC6-T ekhethekileyo anti-ukuwa (Fengxing) lwekontraka ukuze ikheshi. Neemveliso zanelisa imigangatho yesizwe yokubaluleka kwamandla kunye inqanaba yoyilo kuye kwafikelelwa kwinqanaba ephambili apha ekhaya nakumazwe aphesheya. Sifumana ngokoluvo eliphezulu kubathengi uninzi kunye neemveliso zethu lithunyelwa toKorea, Brazil, India, Italy, eRashiya, Taiwanand namanye amazwe kunye nemimandla.
umoya Enterprise: ukufunda, ezintsha, ingqibelelo, ukuzinikela.
nkqubo Umgangatho: peopel oriented.qulity based.creativity kunye accuracy.keep ihamba phambili
ifilosofi Business: ukuba kwimfuno yabathengi njengoko into ephambili. uphando nokuphuhlisa-nyango imveliso ekumgangatho ophezulu iimveliso ixabiso eliphantsi
Umbono Enterprise: ukuba best lwekontraka umenzi.